Hongria, ateveniny amin’ny alàlan’ny fametrahana tranonkala sy fanenjehana eny amin’ny fitsaràna ireo fitaovana entiny miady amin’ny mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2019 15:18 GMT
Sary: hvg.hu. Vakin'ny soratra : “MAMPITOMBO NY METY HISIAN'NY ASA FAMPIHOROHOROHANA ilay anjara isa tsy maintsy ekena amin'ny famindrana toerana ireo mpitsoaponenana! Isaky ny 12 segondra dia misy hatrany ny mpifindra monina tsy ara-dalàna tafiditra ao Eoropa. Tsy misy fantatsika na ny momba azy na izay zavatra kasainy hatao. Tsy fantatsika ny mety ho isan'ireo mpanao asa fampihorohoroana miafina anatin'ireny”.
Nandritra ny 2015 iray manontolo, nirohotra nankao Eoropa ireo mpialokaloka, taminà isa tsy mbola nisy toa azy. Niankina tamin'ireo fantsona tsy ara-dalàna sy ny kisendrasendra fotsiny, ireo izay nandositra ny ady sy ny fanenjehana dia, na sendra tànana mitsotra sy feno fitserana ary fandraisana mafàna, na midona amin'ny fefy tariby feno fantsy sy sakana ara-pitantanana tsy vita hodinganina.
Ny Fiombonamber eoropeàna aza dia nampiseho ny tsy niomanany hanana fitantanana sahaza an'io firohotana io; ary ireo vahaolana narosony dia nidona taminà mpitondra izay mirona kokoa mankany amin'ny tsy fihetsehana na ny fikolokoloana ny tahotra sy ny fankahalàna vahiny any amin'ny fireneny mba hanamafisany ny toerana politika ananan-dry zareo. Hongria no tena naresaka manokana tamin'ny toerana noraisiny manohitra ireo mpialokaloka, niaraka taminà fakàna kevitra nasiônaly mamitaka izay mampitovy ny fifindramonina sy ny asa fampihorohoroana, ary tamin'ny fandrakofana ny firenena taminà fanentanana fametahana afisy manaitaitra.
Tsy nihanona tamin'izany ireo manampahefana hongroà. Nambaran'ny governemantan'ny praiminisitra Viktor Orban sy ny antokony Fidesz ny tetikasan-dry zareo hanao fanentanana iray vaovao hametahana afisy, ka amin'ity indray mitoraka ity dia atodika mivantana hanoherana ny drafitry ny Fiombonambe Eoropeàna ho famindrana toerana manerana ny tanibe an'ireo mpialokaloka izay ao Italia sy Gresy amin'izao fotoana izao. Efa tafapetraka ireo takelaka goavana fampahafantarana ho an'ny fanentanana iray izay hisanda any amin'ny 380 tapitrisa forins any ho any (eo amin'ny 1,2 tapitrisa euros) alaina amin'ireo mpandoa hetra, ary ireo doka mameno pejy manohana ny hevitry ny governemanta dia efa mitsiry eny anatin'ireo gazety mpivoaka isanandro maharakotra ny firenena.
Ny 3 Desambra 2015, notoherin'i Hondria tamin'ny alàlan'ny dingana araka ny lalàna ihany koe ilay drafitra famindrana toerana ireo mpialokaloka. Tamin'ny volana lasa, efa nandefa fanangonantsonia misetrasetra ihany koa izy hanoherana ireo fepetra natolotry ny Fiombonambe Eoropeàna. Nipoitra teny an'arabe ireo tranoheva, ka mpikatroka tsy voaomana ho amin'izany akory no nitazona azy ireny izay manao fampahafantarana antontanisa noforomporonina sy fanehoankevitra mpanavakavaka (lahatsary amin'ny fiteny hongroà). Araka ireo loharano ofisialy, sonia eo amin'ny 900.000 ka hatramin'ny 1 tapitrisa eo no efa voaangona.
Afaka tanterahana ety anaty tambajotra ihany koa ilay fanangonantsonia, ao amin'ny tranonkalan'ny governemanta nosesehana zavatra tsy marina. Ity ny fehezana fanambaràna arahan'ireo fanazavana sy fanitsiana.
“Midika fandraisana olona 160.000 ho ato anatin'ny firenentsika ilay anjara isa tsy maintsy raisina amin'ny famindrana toerana ireo mpialokaloka”.
Raha ny marina, ao anatin'ilay kisarisarin'ny famindrana toerana natolotry ny Fiombonambe Eoropeàna, mpialokaloka miisa 1.294 no efa voafaritra sahady ho an'i Hongria, fa tsy 160.000 araka izay lazain'ny governemanta. Na misy aza ny fampivondronana ny fianakaviana, tsy ho tafakatra an'arivony vitsivitsy akory ilay isa.
“toerana 900 no faritra “no-go” (tsy azo aleha) any amin'ireo tanandehibe eoropeàna : ireo faritra “no-go” dia ireo ampahany amin'ny tanàna sarotra ho an'ireo manampahefana, na tena tsy vitany mihitsy, ny mifehy azy. Any amin'ireny tanàna ireny, sarotra ny hitazonana ireo fenitra ara-piarahamonina, na voasoratra izy ireny na tsia. Any amin'ireo tanandehibe eoropeàna toa an'i Parisy, Londona, Stockholm na Berlin, toerana betsaka mpialokaloka mivelona, misy 900 ireny faritra ‘no-go’ ireny”.
Ny hevitra momba ny “no-go” dia angano iray mahamenatra matetika averina tanisaina any amin'ireo faribolan'ny elatra havanana sy tsy tia mpialokaloka, ary misitery ny niandohan'io isa 900 io.
“Lafo loatra ilay anjara isa tsy maintsy ekena: mety hisy fiantraikany azo tsapain-tànana ny fampiharana ilay anjara isa amin'ny famindrana toerana. Ny fikarakarana mpialokaloka iray, na dia ny fepetra efa misy amin'izao fotoana ihany aza no ho raisina, dia andaniana 130.000 forins [470 euros] isambolana. Tsy ambaran'ny Fiombonambe Eoropeàna hoe aiza no tsy maintsy hakàntsika io vola io ho an'ireo mpifindramoni,a. Ary zavamisy ny hoe hatramin'ny faran'ny volana Novambra, tsy nahazo i Hongira na dia pitiny kely aza tamin'ilay 1,2 lavitrisa forins [4 tapitrisa euros] nampanantenain'ny Kaomisiôna Eoropeàna ho fanampiana maika hanamaivanana ny vesatry ny fifindramonina. Fa mbola indro kelin'ny mpandrafitra koa, ireo mpifindramonina nahita fianarana sy tsara fanabeazana no raisin'ireo firenena tandrefana efa mandroso, raha ireo andian'olona tsy manana fahaizamanao sy faripahaizana kosa no anjara omena raisin'ireo firenena hafa mpikambana”.
Ilay drafitra famindrana toerana naroson'ny Fiombonambe Eorpeàna dia milaza fa ireo firenana mpikambana ao anatiny dia hahazo 6.000 euros isaky ny mpialokaloka iray raisiny. Izay , raha ny marina, dia politika napetraky ny Fiombonambe Eoropeàna efa hatramin'ny 2008. Nandritra ny lohataona, nangataka fanampiana ara-bola tamin'ny Fiombonambe eoropeàna ny governemanta hongroà, ary dia nahazo fampanantenana 4 tapitrisa euros ho famonjena maika io firenena io hiatrehany ny fitobahan'ireo mpialokaloka. Toa tsy narotsaka io vola io noho ny fiatoan'ny fahatongavan'ireo mpialokaloka sy nanakatonan'ilay firenena ny sisintaniny.
Ny adinon'ilay tohankevitra dia ireo 60 tapitrisa euros mahery natokana ho an'ny firenena, tafiditra amin'ilay tahirimbola eoropeàna “Fialokalofana, Fifindramonina sy Fidirana ho isam-piarahamonina, ary Filaminana Anatiny” ho an'ny elanelam-potoana 2014-2020. Tsy ilaina intsony ny milaza hoe tsy tsara rafitra ho afaka tonga dia ampiasain'ireo firenena samihafa mpikambana amin'izao fotsiny ilay drafitra famindrana toerana.
“Manimba ny kolontsaintsika ilay anjara isa tsy maintsy ekena : Miaraka amin'ilay famindràna toerana tsymaintsy ekena, hiova ny taharon'ny foko, kolontsaina ary finoana ato anatin'ny firenena. Tsy manaja ny lalàna misy eto amintsika ireo mpifindramonina tsy ara-dalàna, ary tsy te-hifampizara izay soatoavina ara-kolontsaina iraisantsika. Araka izany, ny famindrana toerana andian'olona marobe avy aminà tanibe hafa sy kolontsaina hafa dia loza mitatao ho an'ny kolontsaintsika, ny fomba fiainantsika, ny fahazarana sy ny fombandrazantsika. Raha tsy mihetsika isika, afaka am-polon-taona vitsy, tsy ho fantatsika intsony i Eorôpa”.
Ho famaranana, tsy misy mihitsy porofo hoe ireo mpialokaloka amin'ny ankapobeny, araka ny ambaran'ny governemanta, dia “tsy manaja ny lalàna [eto amintsika] ary tsy te-hifampizara ny soatoavina ara-kolontsaina iraisan[tsika]”.
Rehefa ireny fanamafisana azo iadiana hevitra ireny no hitany, ary ireo fomba fiteny manaitaitra, notsipihan'ny Kaomity Helsinki hongroà tao anaty fampitambaovao tsy ela akory izay fa tsy isalasalana ny milaza hoe raisin'ny governemanta Fidesz ho toy ny adala ireo Hongroà.
Ireo ” anjara isa ” napetraky ny Fiombonambe Eoropeàna
Ho an'ny ankamaroan'ireo mpialokaloka tonga avy any an-tsambo ao Gresy, dingana iray lalovan-dry zreo fotsiny i Hongria amin'ny dian'izy ireny ho any amin'ireo firenena “tsara fandray” kokoa toa an'i Alemàna sy Soeda.Tamin'ny fiandohan'ny Septambra, nosakanan'ireo manampahefana hongroà tsy handray fiarandalamby ireo mpialokaloka nikasa ho any Alemàna, notereny handeha an-tongotra tamin'ny làlana 170 kilaometatra manasaraka azy amin'ny sisintany aotrisiàna. Nokianin'ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona ny fampitomboana ireny sàkana ireny, nolazainy ho mifanohitra amin'ny andraikitra iraisampirenen'i Hongria.
Niafara tamin'ny fanakatonana tanteraka ny sisintanin'i Hongria tamin'ny tapaky ny volana Oktôbra. Na nisy aza ny fihenan'ny fitobahan'ireo mpialokaloka nankao amin'ny firenena, nivadihan'ny governemanta ilay drafitry ny Fiombonambe Eoropeàana ho famindrana toerana, niheverana hanaparitahana mpialokaloka 120.000 any amin'ireo firenena mpikambana miatrika krizy, hotsijaraina amin'ireo firenena mpikambana rehetra.
“Ndeha ho aiza ianareo ireto izany e?” “Ho any Eoropa, Atoa. Orban !” sary an'i Marian Kamensky. Nahazoana alàlana
Tany am-piandohana, mpialokaloka niisa 15.600 no noheverina hafindra aminà toerana vaovao, avy any Italia, 50.100 avy any Gresy ary 54.000 tao Hongria. Saingy tsy tian'i Hongria ny “hisitraka ilay endrika famindrana toerana an-kamehana”, izay midika fa handray 500 euros isaky ny mpialokaloka iray nafindra toerana i Hongria, hoy ny fanamarihana ao anatin'ilay fampitambaovao ho an'ny gazety avy amin'ny Kaomisiona Eoropeàna. Nitsivalanan'ny Praiminisitra Viktor Orban ny fotokevitra ijoroan'ilay drafitra, ary nolaviny koa ny fanasokajiana an'i Hongria ho firenena iray miatrika krizy, nisisihany ny hoe maro tamin'ireo mpialokaloka noraisina no avy tany Gresy no niditra voalohany. Nandà ilay drafitra ihany koa ny Repoblika Tseky, Romania ary Slovaky.
Faramparany teo dia nanomboka noresahan'ireo minisitra ao amin'ny Fiombonambe Eoropeàna ny fampitsaharana ny faritra Schengen — ilay fifanarahana mamela malalaka ny fivezivezen'ny olona eo amin'ireo firenena mpikambana ao anatiny — mandritra ny roa taona. Gresy no tena voakasika amin'izany, saingy ireo antontankevitra tafaporitsaka dia toa maneho fa mety hihitatra hankany amin'ireo firenena hafa mpikambana ihany koa ilay fepetra, indrindra fa i Hongria. Nivalaketraka, tonga hatrany amin'ny fananganana ny hetsika iray “Ireo Sakaizan'ny Schengen ny governemanta hongroà, niaraka tamin'ireo firenena hafa avy ao Eoropa Atsinanana. Vondrona iray mpandresy lahatra izay azo eritreretina fa tsy hanova na inona na inona akory amin'ireo resaka fankahalàna mpialokaloka sy fankahalàna an'i Eoropa efa ananan'ny governemanta .